जनतालाई मूर्ख बनाउने कोसीस कसैले नगरौं - Pura Samachar
जनतालाई मूर्ख बनाउने कोसीस कसैले नगरौं
-डा डिआर उपाध्याय
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा )अहिले विवादका कारण संकटमा छ। पछिल्लो विवादले पार्टी विभाजन नै हुने होकी भन्र्ने चिन्ता छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दूरी बढेको छ । जनताका आशा अपेक्षा र आफूले गरेका प्रतिबद्धता भुलेर नेकपाका नेताहरू आफ्नो निहित स्वार्थमा लागेका छन । अहिले नेकपामा दुई अध्यक्ष बीचको मनमुटाव नै मुख्य कारणको रूपमा देखा परेको छ ।
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्त र विचारको खडेरी छ। सिद्धान्त र विचारले नै राजनीतिक पार्टीहरू चल्ने हो । तर सिद्धान्त र विचार नै छैन । राजनीतिक व्‍यापार हुन पुगेको छ । अहिले नेकपामा भएको यही हो।अहिलेको अवस्था आउनुमा पार्टी एकता गर्दा सिद्धान्त र बिचारमा एकरुपता ल्याउन नसक्नु हो ।
आन्तरिक दाउपेच, गुटबन्दी, निहित स्वार्थ र शक्तिको बाँडफाँडले पाटी भित्र विवाद ल्याएको छ ।. एकले अर्कोलाई पछार्ने रणनीतिमा नेकपाका शीर्ष नेताहरु लागेका छन ।. यस्तो रणनीतिले नत देशको भलो हुन्छ नत पाटीको ।. देश र पाटी हार्ने रणनीतिले कसैको भलो गदैन । .अहिले नेकपा भित्र त्यहि भईरहेको छ ।. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तीनवर्षे इतिहासमा पटक पटक बिवाद हुने गरेको छ ।. पार्टी एकता, विधि, पद्धतिको बाटोमा जान सकेन ।. नेकपा विवाद भित्र कुनै सैद्धान्तिक वा नीतिगत मुद्दा देखिँदैनन् । सत्ता स्वार्थको राजनीति मात्र देखिन्छ ।. नेकपाले आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको समाजवादोन्मुख बाटो लिन सकेन ।. शीर्ष नेता बीच आपसी लेनदेन मिलेमा विवाद साम्य हुने धेरैले अनुमान लगाएका छन ।. देशको दुर्भाग्य नै हो विगत सात दशकदेखि यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निरन्तर चलिरहेको छ । यसको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्व हो । विश्वका धेरै देश दुःख , कष्ट पार गर्दै विकसित भएका हुन् । किनकि तिनको राजनीतिक नेतृत्वमा देशको विकासका लागि दूरगामी दृष्टिकोण, दृढ अठोट, राजनीतिक प्रतिबद्धता, देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध थियो । त्यसो भएर ती देशहरु विकसित भएका हुन् । हाम्रो नेतृत्वसँग त्यो सोच नै छैन ।. जुन कारणले हामी पछाडी परिरहेका छौ ।. देशमा जनताप्रति समर्पित दुरदर्शि राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ .। अहिले स्थानीयतहदेखि संघीय सरकार एकलौटी रूपमा कम्युनिस्टको हातमा छ ।. तर, तीन वर्षको दौरानमा सुधार हुनुभन्दा देश झन् अराजक स्थितिमा पुगेको छ .। यही अवस्था रह्यो भने देश पुनः अर्को द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ .। जनतालाई मूर्ख बनाउने काम गरिँदै छ । परिस्थिती हिजो जस्तो छैन, जनता सचेत छन , जनतालाई मूर्ख बनाउने कोसीस कसैले नगरौं ।.
सोभियत संघको पतनपछिको विश्व परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन, समाजवादमाथि साम्राज्यवादीबाट चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र तथा माफिया सञ्जालले देशलाई अग्रगमनतिर लैजान अवरोध खडा गरिरहेका छन ।. अव नेकपाले दूरदर्शिता, नीतिगत स्पष्टता, लक्ष्य र अवस्था सापेक्ष रणनीति, कार्यनीति, प्रशासनिक शुद्धीकरण, जनताका आधारभूत आवश्यताको प्राथमीकरण र तिनको परिपूर्तिको कार्यक्रम अनुसरण गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।.नेकपा भित्र कलह जारी छ । दुवै पक्ष आआफ्नो रणनीति तर्जुमा गर्न व्यस्त देखिन्छन् । देश र जनताको भलाईमाभन्दा आपसी झगडामा फस्नु नेपालका राजनीतिक दलहरुको चरित्र हो ।जनताले निर्वाचनमार्फत पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मा नेकपालाई दिएका छन् । सरकार चलाउने जिम्मा पाउनु जनताले गरेको विश्वास हो र यो विश्वासको पछिल्तिर जनअपेक्षा समेत छ । यो सत्यलाई बिर्सिएर दल र नेता शक्ति सङ्घर्षमा मात्र तल्लिन रहनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । नेकपा भित्रको विवाद आगामी महाधिवेशनसम्म जारी रहने सम्भावना देखिन्छ ।
सिड्नीकोआफ्नै युनिटको बाल्कोनिबाट एक नेपालिले हाम्फलेर आत्महत्या गरे ६ महिना पहिले
क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाको सामूहिक बलात्कार, महामारीमा पनि सुरक्षित छैनन् ६ महिना पहिले
घरबाहिर ननिस्कनु नै कोरोना रोकथामको औषधि ३ महिना पहिले
यो जहाज डुवे सबै डुब्ने हो
कस्ता किसानलाई बाँडिदैछ करोडौंको अनुदान ?
धाँधलीको आरोपमा ट्रम्पले हालेको हुलाक मतको मुद्दा सर्वोच्चबाट खारेज
शीर्ष नेताहरुको सत्तास्वार्थको गोलचक्करमा अल्झिएको राजनीति
महिला र पुरुष एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा
नेकपाभित्रको किचलो र कलह झन्झन् चर्किंंदै